Izeluleko eziyi-8 zokugqoka isudi OKUBALULEKILE! | Amadoda aSitayela
Imihlahlandlela yesitayela engu-8 yokugqoka isudi
UCarlos Rivera | | imfashini, Amathrendi
Kwabaningi, ukugqoka isudi isenzo esenziwa nsuku zonke ikakhulukazi ngenxa yezizathu zomsebenzi. Kwabanye, kumane ukugqoka ngezikhathi ezithile ngenxa yesizathu esikhethekile. Noma kunjalo, sonke sifuna ukuphelela uma kuziwa ekugqokeni isudi.
Yebo, kuwo wonke umuntu, sidale lokhu okukhethekile esidlula kukho imihlahlandlela yesitayela eyisishiyagalombili, 'imithetho' esingakwazi ukweqa uma kukhulunywa ngokugqoka isudi. Isishiyagalombili Imihlahlandlela yesitayela esibalulekile futhi lapho sizokwenza khona umehluko. Ngaphandle kokungabaza, ama-decalogue aqondile wokuthungwa.
1 Khetha ukulingana okufanelekile
2 Khetha usayizi wakho ngqo
3 Shiya inkinobho yokugcina yebhantshi ivulekile
4 Vula inkinobho ukuze uhlale
5 Naka imikhono yehembe
6 Izesekeli: okulungile futhi okudingekayo
7 Ungahlanganisa kanjani izicathulo nesudi
8 Naka imininingwane emincane
Khetha kufanelekile kufanelekile
Imango Man suit efanelekile
Isudi elilingana kahle nguTopman
I-Asos skinny fit suit
Kuyinto yokuqala okufanele ucabange ngayo lapho ugqoka isudi. Yini ukusika okungifanela kakhulu, yini ukufaneleka okungifanele kakhulu isibalo. Singahlukanisa i- ukufakwa ngamabhulokhi amathathu ahlukanisiwe amakhulu: ukulingana njalo noma ukusika okuvamile, ukulingana okuncane noma kufakwe i-silhouette cut futhi ekugcineni ukulingana okuncanyana noma ukusika okuqinile. Eposini elikhethekile lokuthi ungagqoka kanjani kahle senze a ukubuyekezwa kokusikeka okuyinhloko kubachaza ngokuningiliziwe. Uma ukhetha i- kufanelekile ekahle usuvele unengxenye yomsebenzi owenziwe.
Khetha usayizi wakho ngqo
Ngazi kanjani ukuthi ibhantshi lami lingifanele? Into ebaluleke kakhulu ejazini lesudi amahlombe. Uma bephuma, udinga osayizi abambalwa. Iphedi yamahlombe yesudi kumele iwele ehlombe lemvelo futhi, ngaphezu kwalokho, kufanele ibe ngaphezulu nje kwayo ngaphandle kokuphuma ngokweqile. Ngaphezu kwalokho, kufanele ukwazi ukufaka inkinobho ngaphandle kwezinkinga.
para amabhulukwe, into elungile ngukuthi benza isibaya esisodwa lapho bezama esicathulweni. Yize kunjalo, kuyiqiniso, ukuthi muva nje amasudi anomphetho osondele kakhulu futhi ashibilika nesihlangu abe semfashinini. Ngaphezu kwalokho, kufanele kucatshangwe ukuthi njengamanje imikhiqizo eminingi inezilinganiso ezimbili zamabhulukwe ezivame ukumakwa ngohlamvu R, ubude obujwayelekile noma obujwayelekile; no-L, njengesilinganiso eside kunazo zonke. Ngakho-ke, isibonelo, indoda engamakhilogremu angama-70 nobude obungamasentimitha angu-170 ibingagqoka ibhulukwe elilingana no-40R, kuyilapho uma kungumuntu ongaba ngamakhilogremu angama-75 cishe ngamasentimitha angu-185 ukuphakama ubegqoka i-40L.
Ngaphandle kwale nuance, kukhona labo abangadinga ukuguqula ingubo uma kwenzeka bengabutholi ubude obufanela isilinganiso sabo esithile. Ukulinganisa phansi kwamabhulukwe esilinganisweni sethu esiqondile kuzokwenza ukuthi kubukeke kukuhle ukuphakama kwethu hhayi sengathi basiboleke yona.
Shiya inkinobho yokugcina yebhantshi ivulekile
Kunomthetho wokubamba ngekhanda osebenza ukusikhumbuza ukuthi ungalibopha kanjani ibhantshi lesudi. Kujakhethi enezinhlamvu ezintathu - okudala kakhulu - kufanele ngaso sonke isikhathi sibophe okuphezulu, kwesinye isikhathi okuphakathi futhi kungabi okuphansi. Yize, njengoba amasudi anamuhla athandwa kakhulu kuyizinkinobho ezimbili, sizohlala sizivale njalo phezulu bese sishiya esingezansi sivulekile. Uma kwenzeka kuba amajakhethi enkinobho eyodwa - okuvame ukwenzeka kumasudi wanamuhla futhi asikiwe ukulingana okuncanyana - ihlala njalo kuvaliwengaphandle kokuthi sihlale phansi, okusiletha ephuzwini elilandelayo.
Vula inkinobho ukuze uhlale
Kubalulekile lapho uhleli lokho Ake sihlehlise zonke izinkinobho zejakhethi uma kubonakala ngathi sikhululekile noma sithandwa kakhulu kunalokho okuboshiwe. Ngakolunye uhlangothi, uma ugqoka isudi enevesti ehambisanayo, izinkinobho ezifanayo zizohlala njalo ziboshiwe, noma ngabe uhleli noma umile, njengoba sibona esithombeni kule migqa. Le mininingwane emincane yenza umehluko phakathi kowesilisa okwaziyo ukugqoka isudi nalowo ongakujwayele ukwenza kanjalo.
Naka imikhono yehembe
Akufanele futhi kuphume lonke ikhafu lehembe, futhi, ngokuphambene nalokho, ibhantshi akufanele limboze lonke ikhafu. Kuyafaneleka ukuthi ihembe liphume okungenani umunwe owodwa, okungaba ngaphezulu noma ngaphansi kwamasentimitha ambalwa. Lokhu kuzokhombisa ukuthi ubude bemikhono yejakhethi bulingana nosayizi wethu.
Okwamanje, Ngobukhulu bejackethi efanayo, imikhiqizo eminingi inamasayizi amabili noma amathathu ubude. Isibonelo, uma usayizi webhantshi lethu lingu-48S, kusho ukuthi bufushane kakhulu ngaphakathi kwalesi sayizi, usayizi olandelayo uzoba ngu-48R, ongakhombisa ubude obujwayelekile noma obujwayelekile futhi, ekugcineni, u-48L obuzokhombisa ukuthi usayizi ohlanganisiwe kude konke okungama-48.
Izesekeli: okulungile futhi okudingekayo
Ngendaba yezesekeli kufanele ulunge futhi unembe kakhulu, okungukuthi, okuncane kakhulu kuvame ukusebenza lapho sigqoka isudi. Ngaphezu kothayi, uthayi womnsalo noma iduku le-lapel, kunezinye izinhlobo zezesekeli ezifana izikhonkwane ze-lapel, iziqeshana zokubopha, noma ama-cufflinks. Ngalezi zesekeli kufanele uqaphele njengoba zingakwazi ukugcwalisa kabusha okuningi bheka futhi, esimweni sokuzisebenzisa, kungcono khetha imiklamo enesizotha ne-minimalist - njengalawo esiwabonisa ngezansi - esikhundleni sokuzijabulisa ngezinto ezinkulu nezinsimbi zobuciko.
Kunoma ikuphi, uma, ngokwesibonelo, sikhetha uthayi oshaya kakhulu, iduku le-lapel, esimweni sokuwugqoka, kunconywa kakhulu ukuthi kube ithoni engathathi hlangothi futhi ukwazi ukushelela. Ngakolunye uhlangothi, uma ukhetha ama-cufflinks okubukisa kakhulu, wenqaba ukusetshenziswa kwebha yethayi noma iphini le-lapel. Kusho isilinganiso. Zama ukudala ibhalansi elinganiselayo nokuthi izesekeli azisibekele isudi kepha yithuthukise. Uma ungabaza, khetha uthayi omuhle bese ukhohlwa okunye.
Ungahlanganisa kanjani izicathulo nesudi
Imibala yezicathulo nezesudu
Izicathulo ezifanayo Ingenye yamaphuzu abaluleke kakhulu futhi, kwabaningi, imvamisa iyikhanda langempela. Ngakho-ke, sethula konke ukuhlanganiswa kwezicathulo okungenzeka kube nohlu oluyisisekelo lwamasudi okufanele wonke umuntu abe nawo.
Ngokuvamile, ngamasudi amnyama, izicathulo ezifanayo kuphela zivame ukubukeka zizinhle, okungukuthi, ezimnyama. Ngamasudi empunga amnyama, izicathulo ezimnyama noma nsundu ngokuhamba kahle zihamba kahle. Ngokwengxenye yayo, kumasudi empunga aphakathi nendawo singagqoka izicathulo ezimnyama, ezinsundu ngokumnyama, onsundu ngokukhanyayo noma ngisho nekamela ne-beige. Ngamasudi aluhlaza okwesibhakabhaka okulingene, izicathulo ezimnyama, nsundu, nsundu ngokukhanyayo noma nge-caramel zibukeka zizinhle. Ekugcineni, ngamasudi amathoni omhlaba sibheja ezicathulweni ngombala onsundu, beige noma oluhlaza okwesibhakabhaka. Ngokuphathelene nebhande, ukuze ulunge ngokuqinisekile, kungcono ukuyihlanganisa nombala ofanayo wesicathulo.
Naka imininingwane emincane
Izicathulo ezihlanzekile, ezipholishiwe nezicwebezelayo zibalulekile uma kukhulunywa ngokugqoka isudi. Lokhu kungashintsha ukubuka konke kwe bheka uma zingekho esimweni esihle. Ngaphambi kokuba ugqoke, ungakhohlwa ukupholisha izicathulo zakho noma ushintshe izintambo uma sezindala. Futhi, hlola ukuthi ifindo likathayi lenziwe kahle nokuthi uthayi umaphakathi maphakathi nehembe elimboze wonke umugqa wenkinobho.
O, futhi kubaluleke kakhulu! qiniseka ukuthi ususe yonke imikhakha yefektri futhi lokho kusebenza ukuvala ukuvuleka ngemuva kwejakhethi. Kubukeka kusobala kepha kunamadoda, angajwayele ukugqoka amasudi, acabanga ukuthi lokhu kuthungwa kwenzelwa inhloso, futhi njengoba wazi ukuthi kungokubhoma okwenza izingubo zingakhubazeki lapho zifika esitolo.
Imininingwane efana nalena esiyiphakamisayo ingakwenza ubukeke uyisidididi noma, kunalokho, ufane nomuntu osezingeni eliphezulu ongazi ukugqoka ngesudi. Ngaphezu kwale mininingwane emincane, Isimo sengqondo sibaluleke kakhulu futhi senza umehluko, ukuhamba ume uqonde futhi ume kahle kuzokwenza isudi yakho ibukeke kubo bonke ubukhazikhazi bayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Imihlahlandlela yesitayela engu-8 yokugqoka isudi
Amabili-ithoni. Kule sizini sinikela ezicathulweni zebicolor
Izitayela zezinwele ezimfushane: sikukhombisa ukuthi ungabukeka kanjani ngamunye